Wasaaradda maaliyada oo xal u heshay muran ka dhashay canshuuraha degmada Afgooye (Dhegeyso) – Radio Daljir
Diseembar 26, 2013 3:00 b 0
Afgooye, December 26, 2013 – Masuuliyiin ka tirsan wasaaradda maaliyada ee Soomaaliya ayaa dhex-galay muran ka dhashay canshuuraha oo ka dhacay degmada Afgooye ee gobolka shabeelaha hoose, wasaaradda ayaa xalisay khilaafka.
Muranka ayaa sahlay in la xiro qaar ka mid ah shirdaha xawaaladaha lacagta ee degmada Afgooye, markii la isku khilaafay canshuurta.
Mahdi Axmed Xasan oo ah gudoomiye ku xigeenka Afgooye ayaa ka hadlay khilaafka ay guusha laga gaaray, waxaana uu sheegay in maamulka degmada ay raali-gelin ka bixiyeen xiritaanka xawaaladaha.
?Arritan waxay ku dhacday aqoon xumo jirta iyo shaqaalihii oo aan fahansanayn nooca shaqada, sidoo kale amni xumo ayaa jirta oo dadku cabsi ayey qabaan.? Ayuu yiri Mahdi Xasan oo daljir ka la hadlay
Dowladda Soomaaliya ayaa bilowday qaadista canshuuraha kala duwan ee dalka, degmooyinka ay canshuur qaadistu ka bilaabtay waxaa ka mid ah degmada Afgooye iyo meelo kale oo ay gacanta ku hayso dowladda federaalka ah.
Dhegeyso: – Maxamed Duyuurad oo daljir ka tirsan ayaa waraystay Mahdi Axmed Xasan
Gargaar loogu tala-galay dadka fatahaada ku baragkacay oo la gaarsiiyey magaalada Jowhar